Kufuneka wenze ntoni ukuba isibini sikude | IBezzia
UMaria Jose Roldan | 06/04/2021 22:13 | Ubudlelwane
Ukuqaphela ukuba iqabane likude lolunye uloyiko lwabo bantu bakubudlelwane. Ukurhoxa kancinci kancinci kubangela ukuba izinto zingafani nasekuqaleni kobudlelwane, kubangele uloyiko lokuba iyakuba sisiphelo sabo.
Ujongene noku, umntu obandakanyekayo akayazi into amakayenze, ukuzama ukwenza yonke into ibuyele kwinto efanayo njengangaphambili. Kwiimeko ezinjalo, kuyafuneka ukuba ufumane unobangela okanye isizathu sokuba elinye lamaqela ngaphakathi kwesi sibini sele likude kwelinye.
1 Ubophelelo ngaphakathi kwesi sibini
2 Unobangela wokwahlukana phakathi kwesi sibini
3 Indlela yokwenza ukuba iqabane likude
Ubophelelo ngaphakathi kwesi sibini
Ukuze isibini sidibanise kwaye sikhule, kubalulekile ukwenza iqhina. Kufuneka kubekho imvisiswano ethile ekunikeni nasekwamkelweni. Ukuba oku akwenzeki, kunokwenzeka ukuba ubudlelwane buya buthathaka ngokuthe ngcembe kwaye ukuhamba kwelinye lamaqela kuqala. Ukuze iqhina lomeleze, kufuneka kubekho ukoneliseka kubo bobabini abo babandakanyekayo kwinqanaba leemvakalelo kunye neemvakalelo. Ukuba oku akwenzeki, kuyinto eqhelekileyo ukuba elinye lamalungu liba kude kwaye ubudlelwane buza kugxothwa.
Unobangela wokwahlukana phakathi kwesi sibini
Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuba umntu abe kude neqabane lakhe:
Umntu uye waphulukana nomntu obalulekileyo kwaye uphakathi kwentlungu. Ngenxa yoku, kuyinto eqhelekileyo ukuba isimilo somntu sitshintshe kakhulu kwaye ingabonisa isuntswana lokuqina kwesi sibini. Ukuba oku kuyenzeka, kubalulekile ukumnika lonke uthando olunokwenzeka.
Uxinzelelo olufunyenwe ngumsebenzi, lusapho okanye liqabane lakho, Ingadala umgama kubudlelwane. Ukuba oku kuyenzeka, kubalulekile ukuba uthethe nesi sibini kwaye wenze izikhokelo ezinokubakho ukoyisa olo xinzelelo.
Ukulwa ngamaxesha onke kunokumtyhafisa umntu kwaye khetha ukuhlala kude kubudlelwane. Ukuphikisana nokulwa akulunganga kwisibini ke kuyacetyiswa ukuba uthethe ngezinto kwaye uphakamise izisombululo.
Ukubandezeleka ngenxa yokungathembeki Yenye yezona zinto zixhaphakileyo anokuzenza umntu ahlukane neqabane lakhe.
Indlela yokwenza ukuba iqabane likude
Nje ukuba unobangela obangela ukuba kude kude kufunyenwe, kubalulekile ukufumana isisombululo ukuze ikhonkco lingaphuli:
Kubalulekile ukuhlala ecaleni kwesi sibini kwaye mbuze ngendlela ezolileyo isizathu sokudana okunje.
Ukuba novelwano kunye neqabane lakho kukunceda wazi ukuba uziva njani kwaye ukwazi ukulungisa ingxaki.
Akufanele uwe kwikratshi kwaye ukude neqabane. Ukuba oku kuyenzeka, izinto ziya kuba mbi kakhulu kwaye kuya kuba nzima kakhulu ukufumana ikhonkco kwakhona.
Ngamafutshane, ukuba iqabane lakho likude, kubalulekile ukuba wazi unobangela oshukumise le meko kwaye zama ukwenza yonke into ibuyele kwindlela eyayingayo ngaphambili. Ubudlelwane phakathi kwesi sibini kubalulekile kwaye kufuneka kukhathalelwe kufuneka kuthathwe kangangoko ukuthintela isibini ngokwaso ekuqhekekeni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Kufuneka wenze ntoni xa isibini sikude